FAQs - Shanghai Huanmai Machinery Technology Co., Ltd.
Inkampani yethu yenye yeefektri ezinkulu eTshayina ezivelisa iilori zokutya kunye neetreyila zokutya.Inkampani yethu ise Shanghai, China, kwaye umzi-mveliso wethu useNantong, China
Ngaba iitreyila zakho zokutya ziyayifezekisa imigangatho yelizwe lethu?
Siza kuyila kwaye sakhe iitreyila ngokweemfuno zamazwe ahlukeneyo.Ukuba uneemfuno ezizodwa, nceda ungalibazisi ukusazisa.
Ngaba ubungakanani, inkangeleko kunye nombala wetreyila yakho yokutya unokwenziwa ngokwezifiso?
Ewe, ezi zinokwenziwa ngokweemfuno zakho.Ukujonga ukhetho lwethu olupheleleyo lweepalethi zombala ezikhoyo, nceda undwendwele www.ralcolor.com kwaye usazise ukhetho lwakho lombala.
Ngaba ungafaka uphawu kwaye uprinte uphawu lwam okanye imizobo kwilori yokutya okanye wenze ngokwezifiso umbala?
Ewe.Sinokwenza inqwelo erhuqwayo yokutya ibe nguwuphi na umbala owukhethayo.Kwakhona, sinokuprinta ilogo yakho ngokulula okanye imizobo kwilori yokutya emva kokuba sifumene umzobo ovela kuwe.
Uzithutha njani iitreyila zokutya?
I-trailer yokutya ayifuni ukukhulula umzimba, kuphela amatayara.Iinqwelwana zokutya ezinobungakanani obuncinci kufuneka zipakishwe kwiibhokisi zomthi, kwaye iinqwelwana zokutya ezinkulu zidinga i-20ft okanye i-40ft izitya zokuhamba.Indlela yothutho ngolwandle.Amazwe awohlukeneyo anamaxabiso awohlukeneyo othutho kunye namaxesha okuhamba.
Ngaba uyazithutha iitreyila ukuya kwilizwe lethu?
Ewe, nceda usicebise ngobubele ukuba yeyiphi i-port ofuna ukuhanjiswa kuyo, siya kujonga ixabiso elitsha lokuthumela ngereferensi.
Ngawaphi amazwe owakhe wathumela kuwo ngaphandle?
Sasithumele eYurophu (e-UK, eJamani, eBelgium, ePoland, eItali, eFransi, eRomania, eSpain, eSwitzerland, eCzech Republic njl.
EMelika: eU.SA, eKhanada
IOceania: EOstreliya, eNew Zealand.
Asia: UAE, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Japan, Malaysia, njl.
Yeyiphi imigaqo yentlawulo yeelori zokutya ezakhiwe ngokwesiko?
Kwii-odolo ezenziwe ngokwesiko, i-50% yentlawulo ephantsi iyafuneka kwaye ibhalansi ihlawulwe ngaphambi kokuhanjiswa.
Zeziphi iintlobo zezincedisi kunye nezixhobo zasekhitshini ezikhoyo?
Iindidi ezahlukeneyo zeenqwelwana zokutya zinezixhobo ezihambelanayo, izixhobo zasekhitshini, njl.
Kukho iinxalenye ezintathu ngokubanzi.1. izincedisi trailer ukutya.2. Izixhobo zekhitshi zegesi.3. Izixhobo zasekhitshini ezifakwa efrijini
Nceda uqhagamshelane nathi ngekowuteshini yamva nje
Zeziphi iziqinisekiso ezidlulayo itreyila yakho yokutya?
CE, ISO, VIN.Ukongeza, zonke iitreyila esizakhayo zilungiselelwe ukuhlangabezana ngokungqongqo kwaye zihambelane neLizwe kunye neemfuno zempilo kunye nolawulo lwasekhaya.
Lithini ixesha lakho lokujika kunye nexesha lokuthumela ngenqanawa?
Emva kokufumana idiphozithi yakho, sinokuqala ukuvelisa iodolo yakho.Ixesha lokuvelisa malunga ne-5 ~ 7 iiveki, kwaye ixesha lomyalelo wencopho liya kwandiswa ngeeveki ezimbalwa.Ixesha lokuthumela ngenqanawa lixhomekeke kwindawo oya kuyo.Nceda uqhagamshelane nathi ngexesha elithile lokuthumela ngenqanawa.
Kutheni kukhuselekile ukuthenga kuwe xa kuthelekiswa nabanye?
Sikwanikezela ngokuqulunqa izivumelwano ezisemthethweni zokuthenga ukuze uqiniseke ukuba siya kunikezela ngokwezivumelwano zethu.Sinikezela ngeeakhawunti zebhanki zenkampani kwaye zijongwe yiChina Customs.Zonke iintengiselwano zengxowa-mali kufuneka zibe nobungqina bokuthunyelwa.Kodwa awudingi kuxhalaba nangaliphi na ixesha njengoko siza kuthumela uhlaziyo ngeefoto kunye neevidiyo zemveliso yetreyila yakho kunye namaxwebhu okuhambisa njengobungqina.
Sinikezela ngamajelo amaninzi athembekileyo okuhlawula, kuquka ukudluliselwa kwebhanki, www.wise.com intlawulo ye-intanethi, njl.
Unokubonisana nebhanki yakho ngendlela yokwenza iintlawulo zamazwe ngamazwe, kwaye sinokukubonelela ngeevidiyo zokuhlawula ku-www.wise.com
Ngaba uyayamkela intlawulo ye-paypal?
Le yifektri yonke yaseTshayina ayikwazi ukuxhasa intlawulo ye-paypal, intlawulo ye-paypal ifanelekile kwiindawo ze-e-commerce (ezifana ne-eBay, i-Amazon, njl.), kunye neemveliso ezinokuthunyelwa ngomoya.Iitreyila zethu zokutya zonke zenziwe ngokwesiqhelo kwaye zifuna ukuba abathengi bahlawule iodolo yedipozithi ngaphambi kokuba ziveliswe.
Ithini ipolisi yakho yewaranti?
Sinikezela ngewaranti yeminyaka eli-10 kwiitreyila zethu kunye nazo zonke izixhobo zasekhitshini kunye nezixhobo zokuncedisa ezithengiswa nazo njengeeaddons.